Maitiro ekudzima zviziviso pa iPhone | Nhau dze iPhone
Ignatius Room | | iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Muchikamu chino tiri kuzokuratidza nzira yekudzima zviziviso pa iPhone, iPad uye iPod touch. Zviziviso zvinobatsira chero isu tichiziva kuzvibata, nekuti, zvikasadaro, ivo vanogona kutipandukira uye kutsamwisa kupfuura kubatsira.
Chinhu chekutanga chatinofanira kufunga tisati tadzima zviziviso kufunga nezve mukana wekuvanyaradza kwenguva. Kudzora zviziviso kazhinji ndiyo mhinduro yakanyanya kana imwe app (yakadai seWhatsApp) inoramba ichipfira zviziviso (kunyanya kubva muboka) asi isu hatidi kunyararidza boka kana kudzima zviziviso zveapp.
1 Maitiro ekudzima zviziviso pa iPhone
2 Maitiro ekunyaradza zviziviso pa iPhone
3 Batidza zviziviso pa iPhone
4 Tarisa maitiro paIOS / iPadOS
4.1 Nzira yekugadzira tsika yekutarisa mode
5 Maitiro ekumisikidza mamodheru emisangano
iOS inotipa nzira mbiri dzekudzima zviziviso pa iPhone:
Kubva pane chero chiziviso chechishandiso chatinoda kubvisa zviziviso (kanganwira iyo redundancy), isu tinotsvedza kuruboshwe.
Tevere, tinya pane mikana.
Kubva pane dzakasiyana sarudzo dzakaratidzwa, tinosarudza Dzora.
Kubva panguva ino zvichienda mberi, iyo application haizoratidze chero zviziviso pane yedu kifaa kudzamara isu tazvimisa zvakare.
Yechipiri nzira yekudzima zviziviso pa iPhone haina kunzwisisika uye inoda kuti isu tiwane iyo iOS yekumisikidza sarudzo nekuita nhanho dzandinokuratidza pazasi:
Kubva pane iyo skrini yekumba isu tinowana iyo Zvirongwa ye iPhone yedu.
Tevere, tinya pane Zviziviso.
Tevere, tinosarudza iyo app yatinoda kubvisa zviziviso kubva.
Mukati mezvisarudzo zvezviziviso zvekushandisa, tinobvisa switch Ita kuti zviziviso zviitwe.
Maitiro ekunyaradza zviziviso pa iPhone
Kana pachinzvimbo chekudzima zviziviso zvese kubva pachishandiso uye kutitadzisa kukanganwa kuvadzosa, sarudzo yakanakisa ndeyekuvanyaradza kweimwe nguva.
Apple inotibvumira kunyararidza zviziviso kweawa uye zuva rese. Kuti tinyaradze zviziviso pa iPhone, isu tinofanira kutevera matanho andinokuratidza pazasi:
Isu tinotsvedza chero chiziviso chechishandiso kuti tinyarare kuruboshwe.
Kubva pane dzakasiyana sarudzo dzakaratidzwa, tinosarudza
nyarara 1 awa
Kana iyo application ikaramba ichitumira zviziviso mushure menguva yatamisa, tinogona kuvanyaradza zvakare nekuita iwo matanho mamwe chete.
Batidza zviziviso pa iPhone
Mamwe maapplication, pese patinovhura (senge WhatsApp) tarisa kana isu tiine zviziviso zvaitwa. Kana zvisina kudaro, zvinotikoka kuti tizvishandise zvakare. Kana iyo application yatakadzima zviziviso, isingatiratidze mukana wekuti tikwanise kuamisa zvakare, isu tinofanirwa kuita matanho andinokuratidza pazasi:
Mukati mezvisarudzo zvezviziviso zvekushandisa, isu takagadzirisa switch Ita kuti zviziviso zviitwe.
Tarisa maitiro paIOS / iPadOS
Nekuburitswa kwe iOS 15 uye macOS Monterey, Apple yakaunza chinhu chitsva chinodaidzwa kuti Nzira dzekusungwa.
Aya mamodhi ekutarisa akavakirwa pane yechinyakare iOS Usavhiringa modhi. Iwo akavakirwa paiyo Usavhiringidza modhi, asi inotitendera kuti tigadzirise kuti ndeapi maapplication atinoda kuratidza zviziviso pachiratidziro uye kuridza ruzha paanenge achiitwa.
Natively, iOS inotibvumira kugadzira anotevera modhi:
Imwe neimwe yeiyi modhi inogadza chaiyo gadziriso yakagadzirirwa iyo chaiyo. Semuenzaniso, kana tikashandisa Kutyaira modhi, ichiri activated, yedu iPhone:
Ichanyararidza zvese zviziviso uye zvinokurudzira.
Inoudza vatinobatika kuti tine zviziviso zvanyaradzwa uye inovabvumira kutumira chiziviso kana iri nyaya yekukurumidzira (inowanikwa chete pamidziyo yeIOS).
Kana munhu ari kuyedza kubata iwe iyi modhi iripo asina iOS kana macOS mudziyo, vanotumira mhinduro otomatiki vachivazivisa kuti hatisi kuwanikwa (kuburikidza neSMS).
Nzira yekugadzira tsika yekutarisa mode
Kunyangwe iwo maconcentration modes ayo Apple anotipa akanakira chero mamiriro ezvinhu, uye anotibvumira kugadzirisa kuti ndevapi vanhu vanogona kuva. svetuka iyo nzira yekubata nesu, chinhu chakanakisa kugadzira imwe inokodzera zvatinoda.
Kuti tigadzire tsika yekutarisa, isu tinofanirwa kuita zvinotevera matanho:
Kutanga, tinoenda kune Zvirongwa zvemudziyo wedu.
Mukati meSettings, tinya paConcentration modes uye tinya pane plus sign iri mukona yekurudyi.
Tevere, tinya Custom.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kumisikidza zita reiyo modhi yatichagadzira, sarudza iyo icon yatinoda kuimiririra uye inoenderana nemuvara wayo.
Tevere, muchikamu Vanhu vakabvumira, tinya pane + chiratidzo cheKuwedzera uye sarudza vanhu vese vanogona kutibata, kunyangwe isu takaita iyi modhi.
Kana isu tisingadi izvozvo zvachose hapana anotinetsa isu tine iyi modhi yakabatidzwa, muchikamu cheVamwe vanhu tinosarudza Hapana.
Dzvanya pakabvumira kuti uenderere mberi nekugadzirisa iyi modhi.
Muhwindo rinotevera, isu tinofanirwa kusarudza maapplication anogona kutitumira zviziviso isu tiine iyi modhi yakagadziriswa.
Zvingangoita kuti mamwe maapplication acharatidzwa nekusarudzika, maapplication atinogona kudzima nekudzvanya pairi bvisa zvese.
Kusarudza maapplication atinoda kuwedzera nemaoko, tinya pane + chiratidzo che Wedzera muchikamu cheMapurogiramu Anotenderwa.
Muchikamu Mamwe Mapurogiramu, tinogona kutarisa bhokisi rakakosha. Iri bhokisi rekutarisa rinotendera mamwe maapplication asina kubatanidzwa mune anotenderwa kutumira zviziviso zvakamakwa seakakosha.
Kana tangogadzira iyo yekutarisa modhi, tinogona kuigadzirisa kuti tiwedzere kana kubvisa mamwe maapplication. Uye zvakare, isu tinogona zvakare kugadzirisa iyo modhi yekumisikidza uye kumisa neautomation kana zvichibva pane hurongwa.
Maitiro ekumisikidza mamodheru emisangano
Kana tangogadzira iyo yekutarisa modhi yatakagadzira, isu tinofanirwa kutevedzera aya matanho:
Isu tinosvika panzvimbo yekudzora nekutsveta chigunwe chako kubva kumusoro kurudyi kwechidzitiro (kana kubva pazasi kana iri iPhone 8 kana yapfuura).
Tevere, tinodzvanya paConcentration kuratidza ese aripo modes.
Kana tichida kuimisa kudzamara tadzima nemaoko, tinodzvanya pairi.
Asi, kana isu tichida kuimisa kweawa, kusvika zuva rinotevera kana kusvika tabva patiri, tinodzvanya pane matatu akachinjika mapoinzi ari kurudyi kwezita reiyo modhi.
Iyo icon yeiyo set mode icharatidzwa kumusoro kwechidzitiro uye pane yekukiya skrini. Neiyi nzira, isu tichakurumidza kuziva kana isu tine concentration mode yakagadziriswa uye kuti chii.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima zviziviso pa iPhone
Apple inoburitsa iOS 15.4.1 kugadzirisa nyaya dzebhatiri